Tombom-bovoka - Best 24 Lip Tattoo Ideas ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Tombom-bovoka - Best 24 Lip Tattoo Ideas ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Aogositra 26, 2016
Efa nahita tatoazy ve ianao teo aloha? Eny ary, raha tsy nahita iray ianao, angamba, fotoana izao ho anao ny hahita ny maro amin'ireny tatoazy lipaka tsara ireny. Ity tatoazy ity dia ho an'ireo fo saro-kenatra izay miezaka milaza tantara iray amin'ny fomba iray izay tsy nisy olona nilaza izany tamin'ny alalan'ny tatoazy.
Ny dikan'ny Tattoo Lips
Ny vehivavy no ampiasaina matetika amin'ny molotra mba hiresahana momba ny asa sy ny erogenous. Azo atao amin'ny loko isan-karazany, fitiavana na loko izy io. Ny molotra mena dia azo ampiasaina hiresahana momba ny fanorohana sy ny fanaovana firaisana ara-nofo raha toa ka voasoritra ao amin'ireo faritra izay manahirana toy ny kibony, ny andilany, ny tendany, sns. Io dia azo faritana amin'ny faritra maro amin'ny vatana izay hamela tarehy boaka. Ny molotra mena izay midika amin'ny fiteny dia azo ampiasaina amin'ny ascultism. Ny molotra mena dia azo ampiasaina hiresahana lohahevitra momba ny erotic sy ny sainy. Resaho koa ireo lohahevitra momba ny taboo izay ahafahanao mifandray amin'izany.
Rehefa misokatra ny vava, dia azo ampiasaina hiresahana momba ny counterculture. Ny molotra dia ampiasaina hanehoana fifandraisana. Ny molotra dia azo ampiasaina hanehoana ny olona amin'ny marika amam-pitiavana. Raha vonona ny hampiseho ny fihetseham-ponao ianao na hiresaka amin'ny ambaratonga manaraka, dia azo ampiasaina hilazana ny tantaranao ny molotra.
Ny fametrahana ny tattoo #lip dia ny fiantraikany amin'ny hatsarana sy ny lafy tsarany. Ny toerana izay tianao handefasana ny endrikao dia tena zava-dehibe. Misy faritra izay mety ho sarotra raha sarotra ny manao tatoazy.
Toa mahatsikaiky ny molotra
Ny ampahany mavesa-danja amin'ny vatana koa dia toerana iray izay ahafahana mandoa vola tatoazy ary mandany fotoana be.
Tattoo tato ho ato
Ny fiterahana, ny tongotra, ny vozony ary ny tanana dia ny ampahany tena miavaka amin'ny vatana izay ahafahan'ny tatoazy atao.
Ny endrika lip #tattoo dia mety ho tsotra na sarotra arakaraky ny zavatra tadiavinao. Azonao atao mihitsy aza ny mampifanaraka ny tato-tenanao amin'ny molotra mba hijery tsara toy izany.
Aza adinoina fa tena zava-dehibe ny toerana misy ilay efitrano. Ny saran'ny tatoazy lipao dia tena hisy fiantraikany amin'ny toerana.
Ny totozy girly girly
Ny trano fonenana any amin'ny arabe sy tanàna feno dia ho lafo kokoa raha oharina amin'ireo any amin'ny faritra hafa. Fantatr'ireo mpanakanto fa mihamaro ny olona miaina any amin'ny toeram-pitsaboana ary mihamaro izy ireo.
Rehefa vonona ny hahazo an'io tatoazy io ianao, dia ataovy azo antoka fa nanao ny fikarohana ianao. Olona maro no eo amin'ny làlan-dàlana satria tsy nahavita nanamboatra tatoazy izy ireo noho ny fahadisoana nataon'ilay artista izay nokaramain'izy ireo.
Word tattoo tattoo
Ny olona dia mampiasa mpiasa matihanina mba hahazoana izany tatoazy lipaka izay tiany.
Tato anaty totozy
Tsy misy lainga milaza hoe lasa tato-tena manan-danja amin'ny lehilahy sy ny vehivavy manerana izao tontolo izao ny tatoavim-bavy.
Devil lip tattoo
Mahita olona maromaro miaraka amin'ny totozy liposika isika raha oharina amin'ny efa-polo taona lasa izay noho ny fahaiza-mamorona izay avy amin'ny tatoazy.
Ny fanandramana sy ny tiana manokana dia nanjary antony roa izay misy fiantraikany amin'ny karazam-borona azonao atao. Ny vidiny dia zavatra izay heverin'ny olona aloha alohan'ny handehanany handokoana. Raha tsy afaka mividy an'ity tatoazy ity ianao dia mety tsy ho safidy tsara izany. Afaka manoratra izay tsapanao amin'ny molotra ianao
Tattoo lip dia lasa iray amin'ireo akanjo lantihy izay hitantsika eo amin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny tsy fanao dia ireo andro izay ananana tabataba lipenina ho toy ny taboo. Manerana izao tontolo izao, tonga mankamin'ny hatsaràna sy ny hafatra izay azo ampiasaina ny tatoazy. loharanon-tsary
Alaivo, ohatra, ahoana ny fahatsapanao fa manana tati-bika mahafinaritra toy izany ianao? Ity dia tatoazy lipaka iray izay nanjary nanjaka nandritra ny taona maro. Ny ankamaroantsika dia tonga nankasitraka asa mahagaga maro izay nosoratantsika tamin'ny ampahany samihafa amin'ny vatantsika mba hampahatsiahy antsika ny ankehitriny sy ny ho avy. loharanon-tsary
Ny karazana tatoazy dia lasa iray amin'ny endrika zavakanto tranainy indrindra noheverin'ny olona. Ny karazana dia lasa endrika endrika na fihetsika fikomiana arakaraka ny ampiasana azy. Misy ihany koa ireo olona mampiasa tatoazy toy ny endrika ornamana. loharanon-tsary
Special Tattoo Lip
Misy tatoazy #design toy izany dia tsy azo odian-tsy hita. Ny hatsaran-tarehy sy ny fahatsapana ataony amin'ny mpilasy dia miteny mafy. loharanon-tsary
Lover Tattoo Lip
Amin'izao andro izao dia lasa mahazatra ny totozy lipotika ka mahita olona iray amin'ny olona efatra. Ny tavy lipo dia asa tanana izay nampiasaina hanehoana zavatra be dia be ary hiresaka momba ny olona. loharanon-tsary
Olona maro no nanenina noho ny faniratsirana ny totozy satria tsy nilalao azy ireo. loharanon-tsary
Tattoo Lip Tattoo
Ny hatsarana amin'ny tatoazy lipaka dia azo ekena fotsiny raha toa ka loko marevaka eo aminao. Ny ampahany amin'ny vatana izay ilainao ny tatoazy lipaka dia be dia be. loharanon-tsary
Izany dia satria ianao no manafina na maneho izany ho an'izao tontolo izao hijery. loharanon-tsary
tattoos sleevetratra tatoazytattoos ho an'ny lehilahycat tattoosdiamondra tattoofitiavana tatoazytattoo octopusarrow tattootatoazy lolomehndi designcompass tattoomasoandro tatoazyTattoo Feathertattoos voronatattoos mpivadyrip tattoostattoos mahafatifatytattoos backtattoostatoazy ho an'ny zazavavytato ho an'ny vatofantsikalion tattoosanjely tattoostattoos foottattoo eyeHeart Tattoostattoo ideastattoo cherry blossomtattoo watercolorNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoos armhenna tattookoi fish tattooeagle tattoostattoo infinitytattoos crosstatoazy voninkazoTatoazy ara-jeometrikanamana tattoos tsara indrindratattoos rahavavymoon tattoostanana tatoazytattoosAnkle Tattoosmozika tatoazyscorpion tattooelefanta tatoazyraozy tatoazyloto voninkazotatoazy foko